के हो लकडाउन ? लकडाउन पालना नगरे के कारबाही हुन्छ ? Nepalpatra के हो लकडाउन ? लकडाउन पालना नगरे के कारबाही हुन्छ ?
के हो लकडाउन ? लकडाउन पालना नगरे के कारबाही हुन्छ ?
के हो लकडाउन ? लकडाउन पालना नगरे के कारबाही हुन्छ ? अहिले धेरै नेपालीको जनचासोको विषय रहेको शब्द हो – लकडाउन । वास्तवमा भन्नुपर्दा के हो त यो लकडाउन ? लकडाउन पालना नगरे के कारबाही हुन्छ ? आउनुहोस् यस बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरौ ।
कोराना भाइरस रोगको विश्वव्यापी रूपमा फैलदै गएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलन नदिन आजबाट सरकारले १ हप्ता ‘लकडाउन’ गरेको छ । आकस्मिक बाहेकका यातायात साधन चलेका छैनन्, नागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट ननिस्कन निर्देशन दिइएको छ ।
अत्यावश्यक काम बाहेक नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन जारी गरिएकोे राज्यले दिएको निर्देशन नै ‘लक डाउन’ हो । यसमा औषधि-उपचार, खाद्यान्न ढुवानी जस्ता अत्यावश्यक काम बाहेक कसैलाई पनि घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइन्छ । आकस्मिक कामका लागि निस्कनै परे सरकार अथवा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ ।
राज्यले संकटको स्थितिमा यस्तो लकडाउन गर्छ । यतिबेला कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी नफैलियोस् भनेर सतर्कताका लागि लकडाउन गरिएको हो । यस्तो समयमा भोज-भतेर, यात्रा र भेलामा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा पूर्ण बन्देज गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक तथा निजी गाडी चलाउन पाइँदैन । यस्तै सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने वायु यान र अनुमतिप्राप्त अन्य उडान बाहेक सबै आन्तरिक तथा बाह्य व्यावसायिक उडान बन्द गरिन्छ । नेपालमा लकडाउन घोषणा हुनुपहिले नै सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन दिएको थियो । लकडाउन को घोषणापछि जो जहाँ छ’, त्यहीँ सुरक्षित ढंगले बस्नुपर्छ ।
लकडाउनमा गर्नुहुने र नहुने कामहरु
७. संक्रमण रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा-२ बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सोको लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने ।
विशेष व्यवस्था गर्ने प्रदेशको अधिकार (सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२०)
हुनसक्छ ६ महिनाको कैद
यदी कुनै व्यक्तिले सरकारको आदेशको पालना नगरेमा १ सय रुपैयाँ जरिवना र १ महिना कैदेको व्यवस्था गरिएको छ । आदेश कार्यन्वयन गर्ने सवालमा अवरोध गरेको सवालमा भने ६०० रुपैयाँ जरिवना र ६ महिना कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकोे छ ।